ဘဝမှတ်တိုင်: Bagan Keyboard Pro [Perfect](Pre Activated!) 3.2.4
Bagan Keyboard Pro [Perfect](Pre Activated!) 3.2.4
Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Activated ဖြစ်ပြီးသားပါပဲ။ ကြိုက်ရာ Setting ထဲကို ကြိုက်သလိုဝင်ပြီး ကြိုက်သလိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
PS: ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ အရင်တစ်ခါပေးတဲ့ဟာက ဆော့ဝဲတစ်ခုတည်းနဲ့ Keyboard လိုရော System Cleaner လိုရော ၂မျိုးသုံးလို့ရတော့ ပိုမကောင်းဘူးလား။ ဖုန်းလေးနေရင် System Cleaner အဖြစ်ပါ သုံးလို့ရတယ်လေ။
<< Download Link2>>
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 3/06/2014 11:15:00 pm
Ye Htwe 17 August 2015 at 02:25
Bagan keyboard codeရပြီးဖွင့်​လို့မရဘူးဗျာ ph​ဘေးလည်​1500​ဆောင်​ပြီးသွားပါပြီ.ဘာဆက်​လုပ်​ရမလဲ​ပြော​ပေးပါအုံး please.